သမိုင်းထဲက ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွား ခဲ့ရတဲ့ ကုန်းဘောင်ခေတ် က မြန်မာ့ လူမျောက် မိသားစု ရဲ့ မျိုးဆက် ပြန်ပေါ်လာ ပြီလား…? – Na Pann San
သမိုင်းထဲက ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွား ခဲ့ရတဲ့ ကုန်းဘောင်ခေတ် က မြန်မာ့ လူမျောက် မိသားစု ရဲ့ မျိုးဆက် ပြန်ပေါ်လာ ပြီလား…?
Na Pann San W | August 14, 2020 | Knowledge | No Comments
ပထမဆုံး လူမျောက် ဖြစ် တဲ့ ဦးရွှေမောင် ကို ၁၇၉၆ ခုနှစ် မှာ သံလွင်မြစ် ( သို့ ) မုတ္တမြစ် ဘေးက လော နိုင်ငံ မိုင်းရုံးကြီး နယ် မှာ မွေးဖွား ခဲ့ တယ် ။ ( ပထဝီ အခြေ အနေနဲ့ အခေါ် အဝေါ် အရ အဲဒီ ဒေသ ဟာ အခု ထိုင်း နိုင်ငံ ထဲက Mae Yong ပဲ ဖြစ်ဖို့ များ ပါ တယ် ) အဲဒီ ဒေသ ကို အပိုင်စား တဲ့ စော်ဘွား တစ်ယောက် က ထူးထူး ဆန်းဆန်း အမွေး အမျှင်တွေ နဲ့ ကလေး ငယ် ကို မြန်မာ ဘုရင် ထံ အထူး အဆန်း လက်ဆောင် ပဏ္ဏာ အဖြစ် နဲ့ ဆက်သ လိုက်တာ မို့ သူ့ အသက် ငါးနှစ် သား အရွယ် မှာ အင်းဝ ဘုရင်ထံ ကို ရောက် လာ ပါ တယ်။
သူ့ တစ် ကိုယ် လုံး မှာ အမွေး နုနုလေး တွေ ရှည်လျားစွာ ပေါက်နေ တယ်။ သူ့ မျက်လုံး အသား အရေ ပုံစံ စတာ တွေ က မြန်မာတွေ နဲ့ မတူဘူး လို့ ဆိုပါတယ်။ ( ဒီ အဖြစ်အပျက် တွေ ကို ၁၈၂၆ မှာ ပထမဆုံး မှတ် တမ်း တင်နိုင် ခဲ့ တဲ့ အင်္ဂလိပ် သံအဖွဲ့ က ကရောဖို့ (ဒ်) မှတ်တမ်း ကို လူထု ဒေါ်အမာ ဆောင်းပါး ထဲမှာ ဖတ်နိုင် ပါတယ် )
ရွှေမောင် ဟာ အဲဒီ က တည်း က နန်း တွင်း မှာ ပျော်တော်ဆက် အဖြစ်နဲ့ ကြီးပြင်း လာ ခဲ့ တယ် ။ မျောက်တွေ လို ကပြ ဖျော်ဖြေ ရပါသတဲ့။ သူ့မိဘတွေ မှာရော သူတို့ မျိုး နွယ်စု ထဲမှာပါ သူ့လို အမွေး အမျှင်တွေ မရှိဘူး လို့ သူက ပြောပါတယ်။ လူပျို အဖြစ် ကို အသက်၂၀ အရွယ် မှ ရောက်ပါ တယ်တဲ့။
အသက် ၂၂ မှာ တော့ ဘုရင် က ( ဘကြီးတော် ဘုရား ) သူ့ကို လှတဲ့ နန်းတွင်းသူ တစ်ယောက် နဲ့ လက်ထပ် ပေးပါတယ်။ သူတို့ ကလေး လေးယောက် ရခဲ့တယ်။ အားလုံး က မိန်းခလေး တွေ ချည်းပါပဲ။ နှစ်ယောက် ကတော့ ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆုံးပါး သွားခဲ့ပြီး တတိယ သမီးလေး က မိခင် ဖြစ်သူ နဲ့ အတော် ကို တူပါ သတဲ့။
နောက်ဆုံး ၂ နှစ် အရွယ် ကလေး တစ်ယောက် ကတော့ သူ့ လိုပဲ အမွေး အမျှင် တွေနဲ့ ဖြစ်လာ တယ်။ အဲဒီ အငယ်ဆုံး သမီး က ရွှေမောင်ရဲ့ အမွေ ကို ဆက်ခံတဲ့ မဖုံး ဖြစ် ပါ တယ်။ ကရောဖို့(ဒ်) ရဲ့ စာအုပ် ထဲမှာ ကိုရွှေမောင် နဲ့ သမီး မဖုံး ရဲ့ ပုံဆိုပြီး ဖေါ်ပြ ခဲ့ရာမှာ ကိုရွှေမောင် ရဲ့ ပုံက ဟုတ်ပေမယ့် မဖုံး ရဲ့ ပုံက မှား နေတယ် လို့ နောက် ပိုင်း မှာ ဟင်နရီနယူး(လ်) က ထောက်ပြ ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ နောက် ၁၈၅၅ မှာ အင်းဝ ကို ကပ္ပတိန် ဟင်နရီယူး(လ်) ရောက် လာခဲ့ ပါတယ်။ သူတို့ ရောက်လာချိန် မှာတော့ ကိုရွှေမောင့် သမီး မဖုံး ဟာ အသက် ၃၁ အရွယ် ရှိနေ ပါပြီ။ သူ့ကို အီတလီ လူမျိုး တစ် ယောက် က လက်ထပ်ပြီး နိုင်ငံခြား ကို ခေါ်သွားဖို့ ကြိုးစား ပါသေး တယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာမင်း က ခွင့်မပြု ခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံး တော့ မဖုံးကို ဘုရင် ကပဲ သာမန် အ ရပ် သား တစ် ယောက် နဲ့ လက်ထပ် ပေးခဲ့ တာလို့ ဆို ရ ပါ မယ် ။ ဟင်နရီယူး (လ်) တို့ လာ ရောက် ချိန်မှာ မဖုံး မှာ သားလေး နှစ်ယောက် တောင် ရနေ ပါပြီ။ ဦးရွှေမောင် ကတော့ လူဆိုး ဓားပြတွေ သတ်ဖြတ် လို့ ကွယ်လွန် ပြီးခဲ့ပြီ လို့ သိရ ပါတယ်။
မဖုံး ဟာ လည်း သူ့ အဖေ ဦးရွှေမောင် လိုပဲ တစ်ကိုယ်လုံးကို အမွေးရှည် တွေနဲ့ ဖုံးလို့ နေပါတယ်။ မဖုံး ကနေ သားသမီး သုံးယောက် မွေးဖွား ခဲ့ပြီး အဲဒီ အထဲက မောင်ဖိုးဆက် နဲ့ မမိ တို့ဟာ မဖုံး လိုပဲ တစ် ကိုယ် လုံး မှာ အမွေးတွေ နဲ့ ဖြ စ်ပါ တယ်။
သူတို့ မိသားစု ဟာ သူတို့ကို အထူး အဆန်း လာကြည့် တဲ့ နိုင်ငံခြား သား တွေ ဆီကနေ အခကြေးငွေ ကို ကောက်ခံ ပြီး အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းမှု ပြုခဲ့တယ်။ သူတို့ ဟာ ကြည့်ရှုသူ တစ်ယောက် ချင်း စီ ကနေ ရူပီးငွေ လေးဆယ် ယူတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
နာမည်ကြီး ဖျော်ဖြေ တင် ဆက် သူ တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ဘာနမ် ဟာ ၁၈၇၁ ခုနှစ် ကတည်း က သူတို့ကို အမေရိကန် ခေါ်ပြီး သူ့ရဲ့ ( Greatest Show On Earth ) ဆိုတဲ့ ဆပ်ကပ်ပွဲ ကြီးမှာ ပြစား ဖို့ ကြိုး စား ခဲ့ တယ် ။ ဒါပေ မယ့် ဘုရင် က ခွင့်မပြု ခဲ့ဘူး။
၁၈၈၅ မှာ တော့ သီပေါမင်း နန်းကျပြီး နန်းတွင်းရေး တွေ ရှုပ်ထွေး နေတဲ့ အချိန် မှာ မဖုံးတို့ မိသားစု ဟာ နေပြည်တော် ကနေ တောတွင်း တစ်နေရာ ကို ထွက်ပြေး ခဲ့ကြတယ်။ မောင် ဖိုး ဆက် ဟာ မျက်စိ မကောင်းတော့ တဲ့ မိခင် မဖုံး ကို ကျောမှာ ပိုးပြီး ထွက်ပြေး ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တော ထဲမှာ သူတို့ ဒုက္ခ ရောက်နေစဉ် မှာပဲ သီပေါမင်း ထံမှာ အမှု ထမ်း ခဲ့ဖူးတဲ့ အီတလီ လူမျိုး အရာရှိ ကပ္ပတိန် ပေပါနို က ( Captain Paperno ) သူတို့ ကို ရှာတွေ့ ပြီး ကယ်တင် ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ ကို ဥပရော ကို ပို့ဖို့ စီ စဉ် ခဲ့ ပါ တယ် ။
၁၈၈၆ ဇွန်လ ထဲ မှာ မမိ ကွယ်လွန် ခဲ့တယ် လို့ ဆို ပါ တယ် ။ အသက်၂၃ နှစ် အရွယ် လောက် မှာ ဖြစ် ပါလိမ့်မယ်။ ၁၈၈၆ နွေရာသီ မှာ တော့ သူတို့ကို လန်ဒန်မြို့ပီကာ ဒလီ လမ်း ပေါ်က Egyptian Hall မှာ ပြန်လည် တွေ့မြင် ရ ပါ တယ်။
၁၈၈၆ ခုနှစ် နွေ ရာသီမှာ မဖုံး နဲ့ မောင်ဖိုးဆက် တို့ အင်္ဂလန် ကို ရောက်လာ ခဲ့ ပါ တယ် ။ အဲဒီ အချိန်မှာ မဖုံး အသက် က ၆၂ နှစ် လောက် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီး မျက်စိ လည်း ကွယ် နေပါပြီ။ ဘာနမ် လည်း သူတို့ ရှိရာ အင်္ဂလန် ကို လိုက်လာ ပါတယ်။ သူ့ အကြံ က အမေရိကား မှာ စီစဉ် တင်ဆက်နေ တဲ့ သူ့ရဲ့ ပွဲထဲမှာ မဖုံး တို့ သားအမိ နှစ်ယောက် ကို ပြသ ဖို့ပါ ပဲ ။
ဒါပေမယ့် သူ့ ထက် အရင် လာပြီး စည်းရုံး နေတဲ့ အခြားသော ပွဲ စီစဉ်နေသူ တွေ လည်း အဲဒီကို ကြိုရောက် နေတာကို တွေ့ခဲ့ ရတယ်။ နောက်ဆုံး မှာတော့ ဘာနမ် ဟာ အခြား သူတွေပေး တဲ့ ဈေးထက် အများကြီး ပိုပေးပြီး သူတို့ မိသားစု ကို ၁နှစ် စာ ချုပ် နဲ့ သူ့ဆီမှာ ပြသ ဖို့ သဘော တူညီချက် ရရှိခဲ့ ပါတယ်။
မဖုံး နဲ့ သားဖြစ် သူ တို့ဟာ ၁၈၈၇ မှာ လန်ဒန် ကနေ ပြင်သစ် နိုင်ငံ က နာမည် ကျော် Folies Bergere ကို လည်း ရောက်သွား ခဲ့ပါသေး တယ်။ အဲဒီနောက် သူတို့ ဟာ ဘာနမ် နဲ့ သဘော တူညီချက် အရ အမေရိကန် က ဘာနမ် ရဲ့ ဆပ်ကပ်ပွဲ တွေမှာ လိုက်ပါ ဖျော်ဖြေ ခဲ့ကြတယ်။
စာချုပ် သက် တမ်း မကုန်ဆုံး မီကာလ ၁၈၈၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ မှာ တော့ မဖုံး ဟာ အမေရိကန် နိုင်ငံ ဝါရှင်တန် ဒီစီ မှာ ကွယ်လွန် ခဲ့တယ်။
၁၈၅၅ ကပ္ပတိန် ဟနရီယူး(လ်) လာတုန်း က သူမ အသက်က ၃၁နှစ် ဆို ခဲ့တော့ ကွယ်လွန် ချိန်မှာ အသက် ၆၄ နှစ်လို့ မှတ်ယူ ရပါတယ်။သူ့ ဈာပနကို ဝါရှင်တန် ဒီစီ သင်္ချိုင်း မှာ ပဲ မြန်မာ ထုံးတမ်း စဉ် လာ အတိုင်း သဂြိုဟ် ခဲ့ တယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
မဖုံး ကွယ်လွန် သွား ပေမယ့် မောင် ဖိုးဆက် ဟာ သူ့ မိန်းမနဲ့ အတူ ဆက်ပြီး ပွဲတွေ ပြသ ခဲ့တယ် လို့ ယူဆရ ပါတယ်။ သူ့မိန်းမ ဟာ တချိန် က နန်းတွင်း အပျိုတော် တစ်ဦး ဖြစ်ပါ တယ်။
မောင် ဖိုး ဆက် ဟာ တစ်ကိုယ် လုံး အမွေးတွေ ဖုံးနေပေမယ့် ခါးကနေ စပြီး ဒူးအထိ မင်ကြောင် အပြည့် ထိုးထား တယ် နူးညံ့ သိမ်မွေ့ပြီး ဉာဏ်ရည် လည်း မနိမ့်ကျ သလို ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန် တယ်လို့ J.J. Weir ဆိုသူ ကလည်း မှတ်တမ်း တင် ခဲ့ တယ်။
မောင် ဖိုးဆက် အကြောင်း နောက်ဆုံး တွေ့ ရတာက ၁၈၉၄ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေ ခဲ့တဲ့ World’s Columbian Dental Congress, Volume 1 မှာပါ။ အဲဒီ အထဲက ဆရာဝန် တစ်ယောက် ဟာ မောင်ဖိုးဆက် ကို ၁၈၉၁ မှာ တွေ့ဆုံ ခဲ့တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
သူ့ရဲ့ သွားတွေ ကို စစ်ဆေး ကြည့်ဖို့ ကြိုးစား ပေမယ့် ပွဲ စီစဉ်သူ တွေက ခွင့်မပြု ခဲ့ဘူး လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ နောက်ပိုင်း မှာတော့ သူတို့ ရဲ့ သတင်းတွေ ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့တယ်။
ထိုကဲ့သို့ မြန်မာပြည်ရဲ့ လူမျောက် မိသားစု မျိုးဆက်များ ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ကွယ်သွားပေမယ့် ယနေ့အချိန်မှာတော့ ဦးရွှေမောင်ရဲ့ မျိုးဆက်လို့ ယူဆရတဲ့ ကလေးငယ်တဦး ရှမ်းပြည်န် ရွာငံမှာ ပေါ်ထွက်လာပြီဖြစ် ပါတ ယ်။ ဦးရွှေမော င်ရဲ့ မျိုးဆက် လို့ သေချာမပြောနိုင်ပေမယ့် လည်း ရွာငံက ကလေးငယ်ကတော့ တကိုယ်လုံးနီးပါး အမွှေးအမျှင်တွေ ဖုံးအုပ်ထားတာကို ထူးဆန်းစွာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ပညာရှင်များအနေနဲ့ လေ့လာကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ။ ရွာငံမြို့က ထူးဆန်းကလေးငယ်ရဲ့ သတင်းကို အောက်မှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်-
ရွာငံမြို့နယ်တွင် မွေးရာပါတစ်ကိုယ်လုံး အမွှေးအမျှင်များပါနေသော ကလေးငယ်ကို စိတ်ဝင်စားသူများနေဟုဆို
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ရွာငံမြို့နယ် ၊ အလယ်ချောင်ကျေးရွာတွင် မွေးရာပါတစ်ကိုယ်လုံး အမွှေးအမျှင်များပါနေသော အသက် ၁ နှစ် ၈ လအရွယ် ဓနုတိုင်းရင်းသား ကလေးငယ်ကို စိတ်ဝင်စားသူများနေကြောင်း ၎င်း၏မိခင်ဒေါ်စမ်းမြင့်မေက ပြောသည်။
အဆိုပါ ကလေးငယ် ၏ အမည်သည် မောင် ထင်ရှားအောင်ဖြစ်ပြီး မျက်ခုံးမွှေး၊ ပါးသိုင်းမွှေး ၊ မျက်တောင်မွှေး နှင့် နဖူးပြင်တစ်ခုလုံးတွင် မွှေးညှင်းနုများပေါက်နေသည့်အပြင် ကျောပြင်တွင် လည်း အမွှေးအမျှင်များထူပိန်းနေသည့် အတွက် ဒေသခံများနှင့် စိတ်ဝင်စားသူများလာရောက် ကြည့်ရှူ့လေ့ရှိကြောင်းသိရသည်။
“ဆရာဝန်တွေကတော့ ဟိုမုန်းဓာတ်များလို့ လို့ပြောတယ်။ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် အချိန်က အားဆေးတွေအမျိုးမျိုးစားလို့ ဖြစ်တာလို့ပြောကြတယ်။ ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးကတော့ကောင်း ပါတယ်။တစ်ခါတစ်လေ နာစေး၊ ချောင်းဆိုးတာ လောက်ပဲရှိပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ကလေးငယ် ၏ ဖခင် အသက် ၅၀ အရွယ် ဓနုတိုင်းရင်းသား ဦးမျိုးဇော် နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ မငယ် (ခ) မစန်းမြင့်မေ တို့သည် ယခုအခါ အိမ်ထောင်သက် သုံးနှစ်သာ ရှိသေးကြောင်းနှင့် ကလေးငယ်ရှေ့ရေးအတွက် လူပုံအလယ်တွင် မျက်နှာငယ်မည်ကို စိုးရိမ်မူရှိကြောင်းသိရသည်။
“အစ တုန်းကတော့ ရွာသားတွေက ကလေးကို လူဝင်စားတယ်။ ဘာဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးမျိုးပြောကြတော့ မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အရမ်းခံစားရပါတယ်။ နောက်ပိုင်း လူသိများ လာတော့၊ ဂရုစိုက်မူခံလာရတော့ ပြန်ဝမ်းသာရပါတယ်”ဟု ၎င်းကထပ်မံပြောသည်။
ကလေးငယ် တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အမွှေးအမျှင်များသည် အချိန်တန် အရွယ်ရောက်ကာ ဟိုမုန်းဓါတ်ပြောင်းလဲလာပါက အမွှေးအမျှင်များ လျော့နည်းလာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
( မှတ်ချက် ။ ၁၉ ရာစုနှစ် မှာ ခန္ဓာကိုယ် ထူးဆန်းစွာ ဖြစ်ပေါ်နေ တဲ့ လူများ ကို ရုံသွင်းပြီး အထူးအဆန်း အဖြစ် ပြစားလေ့ ရှိတဲ့အလေ့အထ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် မှာတော့ လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ မလျော်ညီတဲ့အတွက် အဲဒီလို ပွဲမျိုးတွေ မရှိကြတော့ပါဘူး။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ မိသားစုဖြစ်တဲ့ ဦးရွှေမောင် မိသားစုကို ယခင်ခေတ်က သုံးနှုန်းခဲ့တဲ့အတိုင်း လူမျောက် ဟု သုံးစွဲထားခြင်းဟာ စာ ရဲ့ မူလအာဘော် မပျက်အောင်သုံးနှုန်းထားခြင်း သာ ဖြစ်ပြီး နှိမ့်ချစော်ကား လိုတဲ့ သဘောနဲ့ ခေါ်ဆိုခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ဒီနေရာကနေ ရှင်းပြ လိုပါတယ် ။ စာတည်း )
ပထမဆုံး လူမြောကျ ဖွဈ တဲ့ ဦးရှမေောငျ ကို ၁၇၉၆ ခုနှဈ မှာ သံလှငျမွဈ ( သို့ ) မုတ်တမွဈ ဘေးက လော နိုငျငံ မိုငျးရုံးကွီး နယျ မှာ မှေးဖှား ခဲ့ တယျ ။ ( ပထဝီ အခွေ အနနေဲ့ အချေါ အဝျေါ အရ အဲဒီ ဒသေ ဟာ အခု ထိုငျး နိုငျငံ ထဲက Mae Yong ပဲ ဖွဈဖို့ မြား ပါ တယျ ) အဲဒီ ဒသေ ကို အပိုငျစား တဲ့ စျောဘှား တဈယောကျ က ထူးထူး ဆနျးဆနျး အမှေး အမြှငျတှေ နဲ့ ကလေး ငယျ ကို မွနျမာ ဘုရငျ ထံ အထူး အဆနျး လကျဆောငျ ပဏ်ဏာ အဖွဈ နဲ့ ဆကျသ လိုကျတာ မို့ သူ့ အသကျ ငါးနှဈ သား အရှယျ မှာ အငျးဝ ဘုရငျထံ ကို ရောကျ လာ ပါ တယျ။
သမိုငျးထဲက ထူးဆနျးစှာပြောကျဆုံးသှား ခဲ့ရတဲ့ ကုနျးဘောငျခတျေ က မွနျမာ့ လူမြောကျ မိသားစု ရဲ့ မြိုးဆကျ ပွနျပျေါလာ ပွီလား…?
သူ့ တဈ ကိုယျ လုံး မှာ အမှေး နုနုလေး တှေ ရှညျလြားစှာ ပေါကျနေ တယျ။ သူ့ မကျြလုံး အသား အရေ ပုံစံ စတာ တှေ က မွနျမာတှေ နဲ့ မတူဘူး လို့ ဆိုပါတယျ။ ( ဒီ အဖွဈအပကျြ တှေ ကို ၁၈၂၆ မှာ ပထမဆုံး မှတျ တမျး တငျနိုငျ ခဲ့ တဲ့ အင်ျဂလိပျ သံအဖှဲ့ က ကရောဖို့ (ဒျ) မှတျတမျး ကို လူထု ဒျေါအမာ ဆောငျးပါး ထဲမှာ ဖတျနိုငျ ပါတယျ )
ရှမေောငျ ဟာ အဲဒီ က တညျး က နနျး တှငျး မှာ ပြျောတျောဆကျ အဖွဈနဲ့ ကွီးပွငျး လာ ခဲ့ တယျ ။ မြောကျတှေ လို ကပွ ဖြျောဖွေ ရပါသတဲ့။ သူ့မိဘတှေ မှာရော သူတို့ မြိုး နှယျစု ထဲမှာပါ သူ့လို အမှေး အမြှငျတှေ မရှိဘူး လို့ သူက ပွောပါတယျ။ လူပြို အဖွဈ ကို အသကျ၂၀ အရှယျ မှ ရောကျပါ တယျတဲ့။
အသကျ ၂၂ မှာ တော့ ဘုရငျ က ( ဘကွီးတျော ဘုရား ) သူ့ကို လှတဲ့ နနျးတှငျးသူ တဈယောကျ နဲ့ လကျထပျ ပေးပါတယျ။ သူတို့ ကလေး လေးယောကျ ရခဲ့တယျ။ အားလုံး က မိနျးခလေး တှေ ခညျြးပါပဲ။ နှဈယောကျ ကတော့ ငယျငယျ ရှယျရှယျနဲ့ ဆုံးပါး သှားခဲ့ပွီး တတိယ သမီးလေး က မိခငျ ဖွဈသူ နဲ့ အတျော ကို တူပါ သတဲ့။
နောကျဆုံး ၂ နှဈ အရှယျ ကလေး တဈယောကျ ကတော့ သူ့ လိုပဲ အမှေး အမြှငျ တှနေဲ့ ဖွဈလာ တယျ။ အဲဒီ အငယျဆုံး သမီး က ရှမေောငျရဲ့ အမှေ ကို ဆကျခံတဲ့ မဖုံး ဖွဈ ပါ တယျ။ ကရောဖို့(ဒျ) ရဲ့ စာအုပျ ထဲမှာ ကိုရှမေောငျ နဲ့ သမီး မဖုံး ရဲ့ ပုံဆိုပွီး ဖျေါပွ ခဲ့ရာမှာ ကိုရှမေောငျ ရဲ့ ပုံက ဟုတျပမေယျ့ မဖုံး ရဲ့ ပုံက မှား နတေယျ လို့ နောကျ ပိုငျး မှာ ဟငျနရီနယူး(လျ) က ထောကျပွ ခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီ နောကျ ၁၈၅၅ မှာ အငျးဝ ကို ကပ်ပတိနျ ဟငျနရီယူး(လျ) ရောကျ လာခဲ့ ပါတယျ။ သူတို့ ရောကျလာခြိနျ မှာတော့ ကိုရှမေောငျ့ သမီး မဖုံး ဟာ အသကျ ၃၁ အရှယျ ရှိနေ ပါပွီ။ သူ့ကို အီတလီ လူမြိုး တဈ ယောကျ က လကျထပျပွီး နိုငျငံခွား ကို ချေါသှားဖို့ ကွိုးစား ပါသေး တယျ။ ဒါပမေယျ့ မွနျမာမငျး က ခှငျ့မပွု ခဲ့ပါဘူး။ နောကျဆုံး တော့ မဖုံးကို ဘုရငျ ကပဲ သာမနျ အ ရပျ သား တဈ ယောကျ နဲ့ လကျထပျ ပေးခဲ့ တာလို့ ဆို ရ ပါ မယျ ။ ဟငျနရီယူး (လျ) တို့ လာ ရောကျ ခြိနျမှာ မဖုံး မှာ သားလေး နှဈယောကျ တောငျ ရနေ ပါပွီ။ ဦးရှမေောငျ ကတော့ လူဆိုး ဓားပွတှေ သတျဖွတျ လို့ ကှယျလှနျ ပွီးခဲ့ပွီ လို့ သိရ ပါတယျ။
မဖုံး ဟာ လညျး သူ့ အဖေ ဦးရှမေောငျ လိုပဲ တဈကိုယျလုံးကို အမှေးရှညျ တှနေဲ့ ဖုံးလို့ နပေါတယျ။ မဖုံး ကနေ သားသမီး သုံးယောကျ မှေးဖှား ခဲ့ပွီး အဲဒီ အထဲက မောငျဖိုးဆကျ နဲ့ မမိ တို့ဟာ မဖုံး လိုပဲ တဈ ကိုယျ လုံး မှာ အမှေးတှေ နဲ့ ဖွ ဈပါ တယျ။
သူတို့ မိသားစု ဟာ သူတို့ကို အထူး အဆနျး လာကွညျ့ တဲ့ နိုငျငံခွား သား တှေ ဆီကနေ အခကွေးငှေ ကို ကောကျခံ ပွီး အသကျမှေး ဝမျးကြောငျးမှု ပွုခဲ့တယျ။ သူတို့ ဟာ ကွညျ့ရှုသူ တဈယောကျ ခငျြး စီ ကနေ ရူပီးငှေ လေးဆယျ ယူတယျ လို့ သိရ ပါတယျ။
နာမညျကွီး ဖြျောဖွေ တငျ ဆကျ သူ တဈယောကျ ဖွဈတဲ့ ဘာနမျ ဟာ ၁၈၇၁ ခုနှဈ ကတညျး က သူတို့ကို အမရေိကနျ ချေါပွီး သူ့ရဲ့ ( Greatest Show On Earth ) ဆိုတဲ့ ဆပျကပျပှဲ ကွီးမှာ ပွစား ဖို့ ကွိုး စား ခဲ့ တယျ ။ ဒါပေ မယျ့ ဘုရငျ က ခှငျ့မပွု ခဲ့ဘူး။
၁၈၈၅ မှာ တော့ သီပေါမငျး နနျးကပြွီး နနျးတှငျးရေး တှေ ရှုပျထှေး နတေဲ့ အခြိနျ မှာ မဖုံးတို့ မိသားစု ဟာ နပွေညျတျော ကနေ တောတှငျး တဈနရော ကို ထှကျပွေး ခဲ့ကွတယျ။ မောငျ ဖိုး ဆကျ ဟာ မကျြစိ မကောငျးတော့ တဲ့ မိခငျ မဖုံး ကို ကြောမှာ ပိုးပွီး ထှကျပွေး ခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ တော ထဲမှာ သူတို့ ဒုက်ခ ရောကျနစေဉျ မှာပဲ သီပေါမငျး ထံမှာ အမှု ထမျး ခဲ့ဖူးတဲ့ အီတလီ လူမြိုး အရာရှိ ကပ်ပတိနျ ပပေါနို က ( Captain Paperno ) သူတို့ ကို ရှာတှေ့ ပွီး ကယျတငျ ခဲ့တယျ။ ပွီးတော့ သူတို့ ကို ဥပရော ကို ပို့ဖို့ စီ စဉျ ခဲ့ ပါ တယျ ။
၁၈၈၆ ဇှနျလ ထဲ မှာ မမိ ကှယျလှနျ ခဲ့တယျ လို့ ဆို ပါ တယျ ။ အသကျ၂၃ နှဈ အရှယျ လောကျ မှာ ဖွဈ ပါလိမျ့မယျ။ ၁၈၈၆ နှရောသီ မှာ တော့ သူတို့ကို လနျဒနျမွို့ပီကာ ဒလီ လမျး ပျေါက Egyptian Hall မှာ ပွနျလညျ တှမွေ့ငျ ရ ပါ တယျ။
၁၈၈၆ ခုနှဈ နှေ ရာသီမှာ မဖုံး နဲ့ မောငျဖိုးဆကျ တို့ အင်ျဂလနျ ကို ရောကျလာ ခဲ့ ပါ တယျ ။ အဲဒီ အခြိနျမှာ မဖုံး အသကျ က ၆၂ နှဈ လောကျ ရှိနပွေီ ဖွဈပွီး မကျြစိ လညျး ကှယျ နပေါပွီ။ ဘာနမျ လညျး သူတို့ ရှိရာ အင်ျဂလနျ ကို လိုကျလာ ပါတယျ။ သူ့ အကွံ က အမရေိကား မှာ စီစဉျ တငျဆကျနေ တဲ့ သူ့ရဲ့ ပှဲထဲမှာ မဖုံး တို့ သားအမိ နှဈယောကျ ကို ပွသ ဖို့ပါ ပဲ ။
ဒါပမေယျ့ သူ့ ထကျ အရငျ လာပွီး စညျးရုံး နတေဲ့ အခွားသော ပှဲ စီစဉျနသေူ တှေ လညျး အဲဒီကို ကွိုရောကျ နတောကို တှခေဲ့ ရတယျ။ နောကျဆုံး မှာတော့ ဘာနမျ ဟာ အခွား သူတှပေေး တဲ့ ဈေးထကျ အမြားကွီး ပိုပေးပွီး သူတို့ မိသားစု ကို ၁နှဈ စာ ခြုပျ နဲ့ သူ့ဆီမှာ ပွသ ဖို့ သဘော တူညီခကျြ ရရှိခဲ့ ပါတယျ။
မဖုံး နဲ့ သားဖွဈ သူ တို့ဟာ ၁၈၈၇ မှာ လနျဒနျ ကနေ ပွငျသဈ နိုငျငံ က နာမညျ ကြျော Folies Bergere ကို လညျး ရောကျသှား ခဲ့ပါသေး တယျ။ အဲဒီနောကျ သူတို့ ဟာ ဘာနမျ နဲ့ သဘော တူညီခကျြ အရ အမရေိကနျ က ဘာနမျ ရဲ့ ဆပျကပျပှဲ တှမှော လိုကျပါ ဖြျောဖွေ ခဲ့ကွတယျ။
စာခြုပျ သကျ တမျး မကုနျဆုံး မီကာလ ၁၈၈၈ ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလ မှာ တော့ မဖုံး ဟာ အမရေိကနျ နိုငျငံ ဝါရှငျတနျ ဒီစီ မှာ ကှယျလှနျ ခဲ့တယျ။
၁၈၅၅ ကပ်ပတိနျ ဟနရီယူး(လျ) လာတုနျး က သူမ အသကျက ၃၁နှဈ ဆို ခဲ့တော့ ကှယျလှနျ ခြိနျမှာ အသကျ ၆၄ နှဈလို့ မှတျယူ ရပါတယျ။သူ့ ဈာပနကို ဝါရှငျတနျ ဒီစီ သင်ျခြိုငျး မှာ ပဲ မွနျမာ ထုံးတမျး စဉျ လာ အတိုငျး သဂွိုဟျ ခဲ့ တယျ လို့ သိရ ပါတယျ။
မဖုံး ကှယျလှနျ သှား ပမေယျ့ မောငျ ဖိုးဆကျ ဟာ သူ့ မိနျးမနဲ့ အတူ ဆကျပွီး ပှဲတှေ ပွသ ခဲ့တယျ လို့ ယူဆရ ပါတယျ။ သူ့မိနျးမ ဟာ တခြိနျ က နနျးတှငျး အပြိုတျော တဈဦး ဖွဈပါ တယျ။
မောငျ ဖိုး ဆကျ ဟာ တဈကိုယျ လုံး အမှေးတှေ ဖုံးနပေမေယျ့ ခါးကနေ စပွီး ဒူးအထိ မငျကွောငျ အပွညျ့ ထိုးထား တယျ နူးညံ့ သိမျမှပွေီ့း ဉာဏျရညျ လညျး မနိမျ့ကြ သလို ဆကျဆံရေး ကောငျးမှနျ တယျလို့ J.J. Weir ဆိုသူ ကလညျး မှတျတမျး တငျ ခဲ့ တယျ။
မောငျ ဖိုးဆကျ အကွောငျး နောကျဆုံး တှေ့ ရတာက ၁၈၉၄ ခုနှဈမှာ ထုတျဝေ ခဲ့တဲ့ World’s Columbian Dental Congress, Volume 1 မှာပါ။ အဲဒီ အထဲက ဆရာဝနျ တဈယောကျ ဟာ မောငျဖိုးဆကျ ကို ၁၈၉၁ မှာ တှဆေုံ့ ခဲ့တယျ လို့ ဆိုပါတယျ။
သူ့ရဲ့ သှားတှေ ကို စဈဆေး ကွညျ့ဖို့ ကွိုးစား ပမေယျ့ ပှဲ စီစဉျသူ တှကေ ခှငျ့မပွု ခဲ့ဘူး လို့ ဆိုပါတယျ။ အဲဒီ နောကျပိုငျး မှာတော့ သူတို့ ရဲ့ သတငျးတှေ ပြောကျကှယျ သှားခဲ့တယျ။
ထိုကဲ့သို့ မွနျမာပွညျရဲ့ လူမြောကျ မိသားစု မြိုးဆကျမြား ထူးဆနျးစှာ ပြောကျကှယျသှားပမေယျ့ ယနအေ့ခြိနျမှာတော့ ဦးရှမေောငျရဲ့ မြိုးဆကျလို့ ယူဆရတဲ့ ကလေးငယျတဦး ရှမျးပွညျနျ ရှာငံမှာ ပျေါထှကျလာပွီဖွဈ ပါတ ယျ။ ဦးရှမေော ငျရဲ့ မြိုးဆကျ လို့ သခြောမပွောနိုငျပမေယျ့ လညျး ရှာငံက ကလေးငယျကတော့ တကိုယျလုံးနီးပါး အမှေးအမြှငျတှေ ဖုံးအုပျထားတာကို ထူးဆနျးစှာ တှမွေ့ငျရပါတယျ။ ပညာရှငျမြားအနနေဲ့ လလေ့ာကွညျ့ကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျ ခငျဗြာ။ ရှာငံမွို့က ထူးဆနျးကလေးငယျရဲ့ သတငျးကို အောကျမှာ ဖျောပွလိုကျပါတယျ-
ရှာငံမွို့နယျတှငျ မှေးရာပါတဈကိုယျလုံး အမှေးအမြှငျမြားပါနသေော ကလေးငယျကို စိတျဝငျစားသူမြားနဟေုဆို
ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျး ရှာငံမွို့နယျ ၊ အလယျခြောငျကြေးရှာတှငျ မှေးရာပါတဈကိုယျလုံး အမှေးအမြှငျမြားပါနသေော အသကျ ၁ နှဈ ၈ လအရှယျ ဓနုတိုငျးရငျးသား ကလေးငယျကို စိတျဝငျစားသူမြားနကွေောငျး ၎င်းငျး၏မိခငျဒျေါစမျးမွငျ့မကေ ပွောသညျ။
အဆိုပါ ကလေးငယျ ၏ အမညျသညျ မောငျ ထငျရှားအောငျဖွဈပွီး မကျြခုံးမှေး၊ ပါးသိုငျးမှေး ၊ မကျြတောငျမှေး နှငျ့ နဖူးပွငျတဈခုလုံးတှငျ မှေးညှငျးနုမြားပေါကျနသေညျ့အပွငျ ကြောပွငျတှငျ လညျး အမှေးအမြှငျမြားထူပိနျးနသေညျ့ အတှကျ ဒသေခံမြားနှငျ့ စိတျဝငျစားသူမြားလာရောကျ ကွညျ့ရှူ့လရှေိ့ကွောငျးသိရသညျ။
“ဆရာဝနျတှကေတော့ ဟိုမုနျးဓာတျမြားလို့ လို့ပွောတယျ။ကိုယျဝနျရှိစဉျ အခြိနျက အားဆေးတှအေမြိုးမြိုးစားလို့ ဖွဈတာလို့ပွောကွတယျ။ ကလေးရဲ့ကနျြးမာရေးကတော့ကောငျး ပါတယျ။တဈခါတဈလေ နာစေး၊ ခြောငျးဆိုးတာ လောကျပဲရှိပါတယျ”ဟု ၎င်းငျးကပွောသညျ။
ကလေးငယျ ၏ ဖခငျ အသကျ ၅၀ အရှယျ ဓနုတိုငျးရငျးသား ဦးမြိုးဇျော နှငျ့ ဇနီးဖွဈသူ မငယျ (ခ) မစနျးမွငျ့မေ တို့သညျ ယခုအခါ အိမျထောငျသကျ သုံးနှဈသာ ရှိသေးကွောငျးနှငျ့ ကလေးငယျရှရေ့ေးအတှကျ လူပုံအလယျတှငျ မကျြနှာငယျမညျကို စိုးရိမျမူရှိကွောငျးသိရသညျ။
“အစ တုနျးကတော့ ရှာသားတှကေ ကလေးကို လူဝငျစားတယျ။ ဘာဖွဈတယျလို့ အမြိုးမြိုးပွောကွတော့ မိခငျတဈယောကျအနနေဲ့ အရမျးခံစားရပါတယျ။ နောကျပိုငျး လူသိမြား လာတော့၊ ဂရုစိုကျမူခံလာရတော့ ပွနျဝမျးသာရပါတယျ”ဟု ၎င်းငျးကထပျမံပွောသညျ။
ကလေးငယျ တှငျ ဖွဈပျေါနသေော အမှေးအမြှငျမြားသညျ အခြိနျတနျ အရှယျရောကျကာ ဟိုမုနျးဓါတျပွောငျးလဲလာပါက အမှေးအမြှငျမြား လြော့နညျးလာနိုငျကွောငျး သိရသညျ။
( မှတျခကျြ ။ ၁၉ ရာစုနှဈ မှာ ခန်ဓာကိုယျ ထူးဆနျးစှာ ဖွဈပျေါနေ တဲ့ လူမြား ကို ရုံသှငျးပွီး အထူးအဆနျး အဖွဈ ပွစားလေ့ ရှိတဲ့အလအေ့ထ အနောကျနိုငျငံတှမှော ရှိ ခဲ့ပါတယျ။ ယနခေ့တျေ မှာတော့ လူ့အခှငျ့အရေး နဲ့ မလြျောညီတဲ့အတှကျ အဲဒီလို ပှဲမြိုးတှေ မရှိကွတော့ပါဘူး။ မွနျမာပွညျရဲ့ ထူးဆနျးတဲ့ မိသားစုဖွဈတဲ့ ဦးရှမေောငျ မိသားစုကို ယခငျခတျေက သုံးနှုနျးခဲ့တဲ့အတိုငျး လူမြောကျ ဟု သုံးစှဲထားခွငျးဟာ စာ ရဲ့ မူလအာဘျော မပကျြအောငျသုံးနှုနျးထားခွငျး သာ ဖွဈပွီး နှိမျ့ခစြျောကား လိုတဲ့ သဘောနဲ့ ချေါဆိုခွငျး မဟုတျကွောငျး ဒီနရောကနေ ရှငျးပွ လိုပါတယျ ။ စာတညျး )
ခုခေတ် မြန်မာ မိန်းကလေး အများစု ဘာကြောင့်ဘဝပျက်သွားရသလဲ ဆိုတာ သိေ စချင်လို့ပါ အားလုံး သိအောင်လည်းမျှဝေပေးပါ
” ကူညီပါရစေ “ ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ် မရှိခင်ကတည်းက လူတန်းစား အဆင့်အတန်းမခွဲခြားဘဲ ကူညီခဲ့တဲ့ စံပြ ရဲဝန်ထမ်းကောင်းကြီးမောင်ဖိုးစံ ( ဒူးယား )
အဘ ဦးဖိုးနီပြော တဲ့ လက်ဖဝါးပေါ် မှာ ” လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် ဂမ္ဘီရကြက်ခြေ ပါသူများ အကြောင်း.. “
သမိုင်းဝင် ဘော်ကြိုဘုရား မှ… အသက်ဝင်လှသော ထူးဆန်း အံ့သြဖွယ်ရာ… ” ဘီလူးရုပ်ကြီးများ…”